- नेपाली सन्देश बुधबार, बैशाख १२, २०७५ , 6.6K जनाले हेर्नुभयो
झापा । झापा कनकाइ नगरपालिकाको दुर्गापुरस्थित बिरिङ पुलनजिकै भएको दुर्घटनामा धनकुटा घर भएका एक दम्पतीको मृत्यु भएको छ।धनकुटा देब्रेबासका ४२ वर्षीय राजेश श्रेष्ठ र ३३ वर्षीया पुष्पा श्रेष्ठको दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो।पृथ्वीनगरपछि सुरूंगातर्फ जाँदै गरेका श्रेष्ठ दम्पतीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घटना लगतै टिपर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ।
झापा: मंगलबार दिउँसो झापाको कन्काई नगरपालिका– १ बिरिङ खोला नजिकै भएको दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको छ। पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पुर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको को. १६ प ४२०८ नम्बरको स्कुटरलाई सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको ना. ७ ख ८०१८ नम्बर को टिप्परले पछाडीबाट ठक्कर दिएको हो।
दुर्घटनामा स्कुटर चालक जिल्ला धनकुटा देव्रेबास–४ बस्ने बर्ष ४२ को राजेश श्रेष्ठ र पछाडी सवार बर्ष ३३ की पुष्पा श्रेष्ठको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो। चालक सहित टिप्परलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको इप्रका बिर्तामोडले जनाएको छ।source:nepalibhumi.com